जातीय आरक्षण : कत्तिको जायज ? – Chitwan Post
जातीय आरक्षण : कत्तिको जायज ?
कुनै पनि देशको सबैभन्दा मुख्य विनाशको युद्ध भनेको जातीय युद्ध हो । जातीय युद्ध यस्तो कडा खालको विष हो, जसले अनन्तकालसम्म डसिरहन्छ । नेपालमा पनि यस्तो विषको रोपण भएको छ । खासगरी, जनयुद्धकालमा तत्कालीन माओवादीले आफ्नो मिसन पूरा गर्न यस्तो विष रोपेकोमा कुनै शंका छैन । यो विषले नेपालमा यति उग्ररुप लियो कि कतै नेपाल पनि अब अनन्तकालसम्म गृहयुद्धमा फस्ने त होइन ? सबैलाई त्रास यो मानेमा थियो कि अब आफू कहाँ गएर बस्दा सुरक्षित भइएला र कहाँ बसाइँ सर्दा ठीक होला भन्नेमा नै मानिसहरुको चिन्ता थियो । केही समय यही विषको प्रभावले सारा नेपालीहरुलाई अब नेपाल पनि कंगो र सुडान नै बन्ने भयो भन्ने चिन्ता थियो । तर, विवेकशील नेपालीहरुले जातीय आन्दोलनलाई बढाएर कसैलाई पनि कहिल्यै पनि फाइदा नहुने बरू अत्यावश्यक व्यवस्था संविधानमै गर्ने भन्ने सहमतिपश्चात् जातीय आन्दोलनहरु किनारा लागी सास फेर्न पाएको अवस्था कायम रहेको छ । यद्यपि, यसबीचमा देशीविदेशी जातीयवादका नाइकेहरुले भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबानाहरु बुनिरहेकै थिए र बुनिरहेका पनि छन् । यस आलेखमा कसैलाई भावनात्मकरुपले चोट दिने उद्देश्य नभई स्वस्थकर बहसको सुरूवातका लागि कसैलाई लाग्न सक्ने तीता र नमीठा शब्दहरु जातीय आरक्षणका सवालमा राख्ने जमर्को गरिएको छ ।
२. अहिलेको समस्या के हो ?
जातीय आरक्षणका तरंगहरु उठिरहेको अवस्थामा अहिले लोकसेवा आयोगमा भएको विज्ञापन काण्ड, संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन र सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको कुराले गर्दा पुनः जातीय राजनीति गर्नेहरु सलबलाउन थालेका छन् । देशको एकमात्र भरोसायुक्त संवैधानिक स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगमा समेत राजनीति पसेबाट अब नेपालका कुनै पनि संघसंस्थाहरु स्वतन्त्र छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन । यही नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । अदालत, मानवअधिकार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान केन्द्र, विभिन्न आयोगहरु हुँदै अब लोकसेवा आयोगमा पनि राजनीति गर्ने हो भने कुन संस्थालाई भरोसा गर्ने र चित्त बुझाउने ? सानैदेखि मेहनत र परिश्रम गरी राम्रो अंकका साथ उत्कृष्ट नतिजाल्याई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने क्षमतावान् विद्यार्थीका लागि योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्ला ? चारैतिर निराशा र नमज्जा देखिरहनुपर्ने यो हामी नेपालीको के विवशता हो ? हामीले कुन जुनीमा के पापकर्म गरेका कारण यस धर्तीमा जन्म लिई अपनत्वको महसुस गर्न पाएका छैनौँ ? जताततै अनकन्टार बनाई किन र कसका लागि शासन गर्न सत्तामा गएका छौँ महानुभावहरु ? के तिमीहरुलाई अलिकति पनि देशको माया लाग्दैन ? खाली भँडाउन, फाटो हाल्न र षड्यन्त्र गर्नमा मात्र कति दिमाग लगाउँछौ ?
जताततै हस्तक्षेप गरी थिति बसाल्न सके त राम्रो, तर थिति बसाल्न नसक्ने खालि भाँजोमात्र हाल्ने सांसद्, सरकार र राजनीतिज्ञ हामीलाई किन चाहियो ? के यसैका लागि हो हामीले कर तिरेर तिमीहरुको जीवनचर्या चलाउन राज्यको तालाचाबी सुम्पिएको ? अब त सोच्ने बेला भएन र ? संसारका विकसित देशहरु कहाँ पुगिसके केही हेक्का छ÷छैन ? ती देशहरुलाई भेट्टाउन हामीलाई अथक परिश्रम गरे पनि कति वर्ष लाग्न सक्छ, थाहा छ ? कम्तीमा आजैदेखि सबैको आचरण सुधार गरी अथकरुपले लाग्ने हो भने पनि कम्तीमा सय वर्ष लाग्छ । हामी अझै अरु देशभन्दा हरेक कुरामा सयौँ वर्ष पछाडि छौँ । २१औँ शताब्दीमा पनि हामी यस्तो युगमा बाँच्न विवश छौँ किन ? के हामीले ईश्वरको श्राप पाएर हो ? होइन भने आफू बाँचुञ्जेल र आफू सत्तामा छउञ्जेल किन कुकर्म गर्ने ? किन राम्रो नगर्ने ? किन इतिहासमा नाम नलेखाउने ? खै, नेताहरुको घैँटोमा घाम लागेको ? जायज कुरामा पनि किन सधैँ विरोध गर्नुपर्ने र नाजायज कुरामा किन आवाज निकाल्न नसक्ने ? यो हाम्रो आचरणमा आजैदेखि सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
३. आरक्षण के हो र कहिलेसम्म हो ?
जब पछाडि परेको र संरक्षण दिनैपर्ने समूह राज्यको मूलधारमा आउँदैनन्, राज्यका हरेक सेवासुविधाबाट वञ्चित भई राज्य भएको अनुभव गर्दैनन् र राज्यसम्म पहुँच पुगेको अनुभव गदैंनन् भने त्यस्ता समूहलाई कुनै अवसरमा संरक्षण दिई राज्यको मूलधारमा ल्याउन राज्यबाट दिइने सहयोग नै आरक्षण हो । आरक्षण केही समयको लागि दिइने संरक्षण भएकोले आरक्षण आफ्नो जन्मजातदेखिको अधिकार हो भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनलाई लिएर यतिविधि बबन्डर गर्नु आवश्यक थिएन । तर, तिललाई पहाड बनाउने काम भएको छ र नमज्जा लाग्ने मसला निकालिएको छ । किन हामीले आरक्षण कोटा राखेको भन्ने त सबैलाई थाहा होला, तर आरक्षण के सधैँका लागि हुन्छ र ? युगौँयुगसम्म त आरक्षण हुँदैन नि । जब यस्तो पिछडिएको समूह राज्यको मूलधारमा आइपुग्छ तब आरक्षण दिइरहनको लागि आवश्यकता पर्दैन । आरक्षण यस्तो हुनुपर्नेमा हामीले गलत अर्थ लगाई संवैधानिक गल्ती गरिसकेका छौँ । यहाँ आवश्यकताको आधारमा आरक्षण नदिई जातको आधारमा आरक्षण दिने संवैधानिक भूल गरिसकियो । यसैलाई आधार बनाई दलित वा जनजाति भएकै आधारमा आरक्षण आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार भएको कुरालाई मागका रुपमा ल्याउने काम गरिएको छ, जुन भनिरहँदा असाध्यै तीतो लागे पनि आखिर सत्य यही हो कि आरक्षण जातिका आधारमा दिने होइन र यसरी दिनु गलत छ ।
जतिसुकै धनी र सम्पन्न भए पनि दलित र जनजातिको छोराछोरीले आरक्षणको कोटा पाउने तर गैरदलित जतिसुकै गरिब, विपन्न, पिछडिएको र दुर्बल भए पनि आरक्षण नपाउने व्यवस्था गर्नु कत्तिको जायज हो ? यसकारण के भन्न सकिन्छ भने कि त अबदेखि आरक्षणको व्यवस्था गर्दै नगरौँ र गर्ने नै हो भने जातको आधारमा त गर्नै हुँदैन । आरक्षणको व्यवस्था गर्नु अझै आवश्यक ठानिएमा भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक अवस्था, अवसरको सदुपयोग गर्ने क्षमताजस्ता आदि कुरालाई मापदण्ड बनाउनैपर्छ । यसले कसैलाई नराम्रो लाग्ला र कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्लाजस्तो लाग्दैन । किनकि, आखिर एक त आरक्षण युगदेखि युगसम्म हुँदैन र अर्को आरक्षणले केही समय आनन्द आए पनि कुनै दिन पछुतो लाग्छ । उदाहरणका लागि बाहुन वा क्षेत्रीको छोराले डाक्टर पढ्न ९५ प्रतिशत ल्याउँदा पनि नपाउने र दलित वा जनजातिको छोराले सोही प्रतिस्पर्धामा ५५ प्रतिशत ल्याउँदा पढ्न पाउने भएमा केही क्षण त आफूले ठूलै युद्ध जितेजसरी आनन्द पक्कै आउँछ, तर केही समयपश्चात् जब उसले कुरा बुझ्छ र आफ्नो कारणले प्रतिभावान् व्यक्तिले पढ्न नपाएको कुराले उसलाई जीवनभर पोलिरहन्छ । के यस्तो हुनु दुःखलाग्दो होइन त ? एकपटक सबैले महसुस गर्नुपर्ने भएको छ ।
आरक्षणको यस सवालले पक्ष÷विपक्षमा अनेक मतहरु आउलान्, तर जायज कुरा सधैँ जायज नै हुन्छ । मुढे बल र चतु¥याइँका आधारमा केही समय नाजायज कुराले पनि स्थान पाउलान्, तर कालान्तरमा जायज कुराकै जित सुनिश्चित छ । सुविधा खाँदै आएकाहरुलाई यस्ता कुराहरुले फरक पार्न सक्छ र अभ्यस्त हुन समय लाग्छ, तर वास्तविकताको नजिक पुगेर हेरेपछि स्वतः चित्त बुझ्न थाल्छ र अभ्यस्त हुन पनि सकिन्छ । त्यस कारण, हामी क्षणिक आवेशमा आएर होइन कि दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता कुराहरुलाई समयमै सच्याउनु राम्रो हुनेछ ।
आरक्षण नै सही तर आरक्षण कहिलेसम्म दिने त ? प्रस्ट हुनुप¥यो नि । आरक्षण नै सही तर आरक्षण केको आधारमा दिने त ? आरक्षण दिँदा के जातिगत नाम, थर भएको आधारमा दिनु जायज हो त ? आरक्षण पाउन केवल दलित वा जनजातिकै कोखबाट जन्म लिनुपर्ने हो त ? के विपन्न र पिछडिएको बाहुन÷क्षेत्रीले नाम र थरको कारणले कहिल्यै आरक्षण नपाउने त ? यसो भनिरहँदा खस आर्य समूहलाई पनि केही आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । उसो भए गैरदलित, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला आदि सबैले आरक्षण नै पाउने हो भने बाँकी को रह्यो त ? आखिर सबै वर्ग र समूहले आरक्षण कोटा लिइरहेका छन् भने सबैको लागि पनि आरक्षण हुन्छ र ? सबै उही भएपछि वर्ग नै भएन, हैन र ? यदि हो भने आरक्षण किन र केका लागि त ? यसलाई सधैँका लागि अन्त गर्ने कानुन बनाई संविधान संशोधन गरे कसो होला ?
आरक्षणसम्बन्धी विषयलाई सबैले बुझियो भने सबैका हितका लागि र राष्ट्रको गुणस्तरीय विकासका लागि आरक्षण प्रथा गलत छ भन्न सकिन्छ । अन्यथा, सबैले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र जन्मसिद्ध अधिकारसँग जोडियो भने निश्चित छ कि यो महारोगको रुपमा र जातीय द्वन्द्वका रुपमा युगौँसम्म रहनेछ । यसका साइड इफेक्ट्हरु डरलाग्दा हुनेछन् र कसैलाई भलो नभई कुभलो मात्र हुनेछ । अतः आजैदेखि आरक्षण पद्धति कत्तिको सही र कत्तिको गलत भन्नेबारेमा स्वस्थकर बहस चलाऔँ । स्वस्थकर बहसले पक्कै पनि स्वस्थकर निकास निकाल्ने नै छ ।
(प्राध्यापक, मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोती, नवलपुर)
दम र तपस्याको महिमा (महाभारत–चिन्तन)